Tube Mills & Roll Lines U samaynta
Miinooyinka tuubooyinka iyo khadadka samayska duudduubku waxay sameeyaan lammaane dabiici ah. Sidaas oo kale samee khadadka duudduuban ee samaysyada iyo mishiinnada tuubada.
Natiijada degdegga ah ee ka fiirsashada mowduucyadan la yaqaan ee isku xigxiga waa isbeddel xooga la saarayo: oo lagu aadi doono tirada badan iyo noocyada kala duwan ee badeecadaha la rogay ee ku jira waardiyaasha qaab-dhismeedka adduunka iyo albaabbada albaabka ilaa baalal-helikobtarrada, nidaamyada beddelka iyo baabuurta tareenka.
Haddii ay jiri lahayd fikrad noocaas ah liis nacasnimo ah, alaabada la sameeyay waxay noqon lahaayeen musharrax hoggaamineed. Liis kale oo aad u baaxad weyn ayaa laga yaabaa in lagu soo ururiyo warshadaha curyaamin lahaa-runtii naafo-la'aantood. Dabcan, isku mid ayaa laga yaabaa in laga sheego wax soo saarkii hore ee ugu fiicnaa ee warshadda tuubada farshaxanka. Laakiin taasi waxay noqon doontaa in dib loogu celiyo wax iska cad.
Noocyada naqshadaynta dhagax -qabow ee duudduuban ayaa loo qaybin karaa noocyo badan, waxay dabooli kartaa baahiyaha kala -duwan ee hawsha si loo habeeyo. Marka loo eego heerar kala duwan si loo kala saaro nooca dhagaxshiidka. Haddii aad dooratid sida waafaqsan saxanka saxanka, mashiinka duudduuban ee loo adeegsado ka shaqaynta biraha xaashida wuxuu noqon karaa mid kulul oo duudduuban laba, dhumucda saxda ah ee kiiska duudduubka ah, mishiinka waxaa loo qaybin karaa saxan qabow-duuban Waxa kale oo jira laba nooc oo mishiinnada duudduuban ee duudduuban.
Haddii aad u baahan tahay xariijin duudduuban si aad u kala soocdo mishiinnada duudduuban ee duudduuban, mishiinka duudduuban waxaa loo qaybin karaa dhagax-ku-rogid is-daba-joog ah iyo dib-u-rogid dhagax-rogid. Si kastaba ha ahaatee, xiisadda dhagax -abuurka ayaa iyaduna ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan, dhibaatooyinka xiisadda dhagax -abuurka guud ahaan waxay ka dhacaan duubista, habka rogiddu waa muujinta muhiimka ah. Soosaarka duudduubka qabow ee duubista, duubista xiisadda sare ayaa ah muujinta wax soo saarka, haddii nidaamka xiisadda uu yahay mid macquul ah, markaa waxaad xaqiijin kartaa xasilloonida hannaanka duudduubka, iyo sidoo kale tayada xarigga dhammaystiran ee xakamaynta wanaagsan. Xiisadda sare ee dhagaxa rogaalka qabow waxay ka hortagi kartaa ifafaalaha ka leexashada goobta shaqada, isla mar ahaantaana waxay leedahay shaqada si otomaatig ah ula qabsiga si saxanka duudduuban uu u noqdo mid siman oo yarayn kara cadaadiska duudduuban si looga fogaado isbedel, si loo hagaajiyo wax -soo -saarka wax -soo -saarka iyo hagaajinta shaqada shaqada inta ay le'eg tahay.